युद्धअपराधमा प्रचण्डबिरुद्ध गंगामायालाई राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा उभ्याउने प्रपञ्च ! – YesKathmandu.com
युद्धअपराधमा प्रचण्डबिरुद्ध गंगामायालाई राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा उभ्याउने प्रपञ्च !
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वमाओवादी नेताबिरुद्ध गोर्खा भूजेलकी गंगामाया अधिकारीलाई संयुक्त राष्ट्रिसंघ मानवअधिकार समितिमा उभ्याउने कसरत थालिएको छ । अध्यक्ष दाहाल र पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई विश्वभर ‘युद्ध अपराधी’का रुपमा चिनाउन गंगामायालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा पुरयाउने तयारी गरिएको एक मानव अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
गत बुधवार मानवअधिकारकर्मीहरुसँग गंगामाया पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयमा पुगेकी थिइन । संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय प्रतिनिधि भलेराई जुलियान्डसँग उनले युद्ध अपराधीलाई कारवाहीको सहयोग मागेकी थिइन । जुलियान्डसँग भनेकी थिइन ‘म संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमै पुगेर न्याय माग्न चाहन्छु, तपाईले सहयोग गरिदिनु परयो ।’ जवाफमा जुलियान्डले पनि आफुले सहयोग गर्ने बाचा गरेकी थिइन । नेपालमा सक्रिय एक समुहले गंगामायालाई राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा उभ्यिाएर प्रचण्डलाई युद्ध अपराधीका रुपमा विश्वभर प्रचार गर्ने योजना बनाइरहेको सूचना नेकपाले पनि पाएको छ ।
गंगामायाले जुलियान्डसँग भेटेलगतै डा. गोबिन्द केसी इलाम पुगेर अनशन बसे । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनशन बसेका केसीले ‘युद्ध अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने’ नयाँ माग थपे । उनको यो माग चिकित्सा क्षेत्रसँग कुनै साइनो छैन । तरपनि उनले युद्धकालिन मुद्दालाई आफ्नो मागको बिषय बनाए । ‘एउटै समयमा गंगामाया राष्ट्रसंघको कार्यालयमा पुगेर फोटो खिचाउनु र गोविन्द केसी युद्धकालिन मुद्दालाई माग बनाएर अनसन बस्नु संयोग मात्र होइन, यो सुनियोजित षड्यन्त्र हो’ नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य योगेश भट्टराईले भने ‘सभ्य डाक्टरले असभ्य भाषा बोल्दै केपी र प्रचण्डसँग लड्छु भन्ने आँट कहाँबाट आयो ? यो आँट षड्यन्त्रको एउटा भुल्का हो ।’
डा. केसीको पहिलो अनशन डीन नियुक्तिमा थियो । त्यसपछि उनी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि अनसन बसे । उनको अनसनले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार आउने संकेत देखा परेको छ । तर पछिल्लो समय उनले राजनीतिक नेताहरुलाई चुनौति दिँदै राजनीतिक मुद्दामा हात हालेका छन् । उनी आफै राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गरेको नभई षड्यन्त्रको गोटी बनेको नेकपाले विश्लेषण गरेको छ ।
गंगामायालाई राष्ट्रसंघको कार्यालयमा पुरयाउन लागेको जानकारी नेकपा अध्यक्ष दाहालले पनि पाएका छन् । पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा आफुलाई निरन्तर धम्कि आएको बताएका थिए । भर्खरै सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी एकता र आफुबिरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको बताएका थिए । ‘पार्टी एकता हुन नदिन पहिले मलाई प्रलोभन देखाइयो, त्यसपछि धम्कि दिइयो’ स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए ‘प्रलोभन सकियो तर धम्कि भने निरन्तर आइरहेको छ ।’
केही अधिकारकर्मी र कानुन ब्यवसायीहरु गंगामायालाई राष्ट्रसंघको मुख्यालय पुरयाउने तयारीमा जुटेका छन् । गोविन्द केसीदेखि गंगामायालाई उनीहरुले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न लागेको सुचना बालुवाटारमा पनि पुगेको छ । ‘शान्ति, लोकतन्त्र, पार्टी एकता र सरकारबिरुद्ध गतिविध भइरहेको सुचना बालुवाटारसँग छ’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ‘गतिविधिहरु सुष्मरुपमा नियालीरहेका छौ ।’